Mitambo yekumhanyisa isingagumi yemumhanyi ye iPhone yedu | IPhone nhau
Iyo inonyanya kudhakwa isingagumi mumhanyi mitambo ye iPhone yedu
Alex Ruiz | | IPhone mitambo
Icho chimwe chechikamu chinozivikanwa kwazvo chemitambo kurodha pasi nekutamba pane edu zvishandiso, iyo asingamhanyi, ivo vanonyanya kubata kumhanyira kurufuZviripachena kuti mitambo iyi haina magumo uye kunakirwa kwavo kuri mukuyedza kuenda nepose pazvinogona, zvakare kuyedza kuwedzera zvibodzwa zvakakwira kwazvo. Ndiyo mitambo inodhakwa zvakanyanya ye iPhone yedu, nekuti neshamwari dzedu tinogona kugovana madaro edu akareba, zvibodzwa zvedu uye kurwa kunovimbiswa.
Kunyanya mune izvi mune kubudirira kwemitambo iyi mu share uye edza kurova mhedzisiro yawanikwa yeshamwari yedu. Kubudirira kwazvino kwemutambo Flappy Bird, yatobviswa muApp Store, humbowo hweizvi. Asi pane zvimwe zvakawanda zvinozivikanwa uye pamwe zvisingazivikanwe kuvaverengi vedu kana avo vakangozviedza isu isu. Izvi ndizvo mitambo yatakasarudza zvakanyanya muchikamu ichi:
2 Minion inomhanyisa
3 Jetpack mufaro
4 Zvidiki mapapiro
6 Kubata Kwevanyengeri
Iyo inotevera kune yakabudirira kwazvo mutambo weTembere Run, ese ari maviri anokwenenzvera mamirioni ekurodha pasi rese. Isu tinozviisa isu mune shangu dzevakatsvaga vakasiyana vatinogona kusarudza kubva uye mumwe nemumwe aine akasiyana hunyanzvi. Chinangwa ndechekuti tiza kubva kutembere uye edza kuti usabatwe nechikara izvozvo zvinotitambudza. Tichaedza kukunda zvese zvakateedzana zvemiteyo, zipi mitsara, ngoro uye kudzikisira kwemugwagwa tichiedza kuti titore huwandu huwandu hwemari yekutenga nayo magetsi-anozotibatsira kuenda kumberi.
Mutambo weGameloft nezve zvisikwa zvidiki kubva muvhi Zvinondishamisa Me Gru. Isu tinozozviisa pachedu mune shangu dzechimwe chezvinhu izvi, maMinion, kuti timhanye nemhando dzakasiyana dzeiyo firimu uye tidzivise misungo isingaperi uye zvipingaidzo zvinounganidza mabhanana. Tichatofanirwa kukunda vakaipa vemufirimu vanozoonekwa nguva nenguva. Shamwari dzakawanda dzatinadzo mairi Facebook uye Game Center Nemutambo uyu tinogamuchira mamwe mapoinzi ekuvakunda.
Mumwe mutambo unoshamisa mune ino chikamu, isu ticha bata Barry, hunhu uyo ​​ane bhegi-roketi rinoitisa iyo nekubata kwemunwe wedu. Chinangwa chemutambo uyu zvakare kuenda kure sezvinobvira uye kupasa akateedzana bvunzo dzinozokurudzirwa kwatiri. Tinogona zvakare kutora zvakasiyana motokari uye kunyange dhiragoni kufambisa rwendo. Chimwe chinhu chitsva chinounzwa nemutambo uyu iroulette vhiri mushure meimwe bhonasi mutambo muchimiro chemari kana yechipiri mikana.
Kana iwe usina kuuya nenguva isati yatorwa Flappy Bird, Uyu ndiwo mutambo wepakutanga wapfuura unosanganisira kukunda mamwe mazinga nekutyaira iyo shiri diki kuburikidza neiyo orography seyesiraidhi iri kuyedza kufambisa uye nekukurumidza kumhanya. Inosanganisira kukwikwidzana kuzuva Rima risati rasvika Kuoma kwemiyedzo yatinofanirwa kukunda kupfuura pakati pezvitsuwa kunozowedzera zvishoma nezvishoma mukuwedzera pakumhanya kwezuva.
Yakanga iri kwenguva yakareba imwe yeanonyanya kubhadharwa ekushandisa ekubhadhara Kuburikidza neApp Store pasirese, mutengo wayo wakaderera (€ 0,89) nekutamba kwayo kunoita kuti mutambo uyu uve mumwe wemakuru ari muchikamu. Isu tinobata skier munyika izere nemhuka uye ndichave kuti vachatirova uye vatibatsire kusvika kure sezvinobvira kudzivirira kudhonzwa kwe chando avalanche. Tichafanirwawo kupfuudza akateedzana ebvunzo ayo anosanganisira stunts nehunhu.
Kana iwe usingazvizive, zvirokwazvo zvichakushamisa iwe, isu tinofanirwa kusvika iyo kwakadzika kunogoneka kudzika nechirauro chedu tsvimbo yekubata hove, apo isu tichinzvenga hove dzisingaperi uye zvisikwa zvemumvura mumakungwa mana. Kana tisisakwanise kuvadzivirira nekuredza imwe, tsvimbo ichatanga kutora mutsetse uye ndipo patinofanirwa unganidza nhamba hombe yehove inodzivirira iyo jellyfish iyo inobvisa zvibodzwa. Pakusvika pamusoro, hove dzese dzinobhururuka nemumhepo uye isu tinofanirwa kuchipfura nechombo chedu kuti titore zvibodzwa zvakanyanya. Nemari iyi isu tichawana mitsara yakareba, zvakanakira uye zvombo zvine simba zvakanyanya pfura hove.
Parizvino mitambo yatatarisa yakanakisa yekumhanya kusingaperi asi muApp Store kune zvakawanda uye zvechokwadi zvinonakidza iwe, wakambokomberedza pamberi pe iPhone yako. Ndevapi vamwe vaunofunga kuti vakakodzera kuve muchikamu ichi?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Iyo inonyanya kudhakwa isingagumi mumhanyi mitambo ye iPhone yedu
alexander safe akadaro
Pindura kuna Alejandro Segura
Dzidziso: Maitiro Ekuchinjisa Yako Izwi Memos kubva ku iPhone kuenda kuComputer
TouchBar: Activate uye deactivate toggles kubva chinzvimbo bhaa (Cydia)